Ungayisebenzisa kanjani imimoya ye-Ultrasonically Fat-Wash - Hielscher Ultrasound Technology
Indlela Yokusebenzisa Ama-Ultrasonically Fat-Geza Imimoya
Umoya ohlanjululwe ngamafutha uyisiphuzo sokuphuza utshwala esifakwe ngamafutha noma amanoni.
Amagagasi amakhulu aphezulu anamandla enza ama-emulsions amahle kakhulu futhi akhule ngakho-ke ukudluliswa okukhulu phakathi kwezigaba ezimbili.
Ngokuhlanza amafutha e-ultrasonic, umoya ufakwa iphrofayli ye-flavour yamafutha futhi uthola ukunambitheka okusha okuhlukile.
Utshwala bunamandla okuqeda ukunambitheka koketshezi okugcotshiswayo kanye namanzi. Ku-alcohol egezwe ngamafutha, uwoyela noma amafutha kusetshenziswa njengesithako esinikeza ukunambitheka. Kuma-oyela, isib. I-sesame oil, kanye namafutha, isb. Amafutha e-duck, iningi lamakhompiyutha anephunga akhiqizwa kalula. Ngenqubo yokugeza amafutha, umoya ufakwa izakhi zamakha kawoyela.
I-ultrasonication idala amaconsi amancane kakhulu ngaleyo ndlela i-emulsions emihle. Ngenxa yamaconsi amancane-nano-nano, ukudluliswa okukhulu phakathi kokuphuza utshwala namafutha kuthuthukiswa kakhulu. Ukudluliswa kwezinga eliphakeme kusho ukuthi izingxenye eziningi ze-flavour zidluliselwa ophuzweni. Imimoya ithola ukunambitheka kwamafutha, kodwa hhayi ukugcoba kwayo.
I-120g / 4 oz ozondla kakhulu amafutha OR OR 240g / 8 oz (noma 6 fl oz.) Ngamafutha amancane / amafutha aphansi
750ml (25 fl oz.) Womoya (isb. Vodka, gin, rum)
I-Ultrasonic Fat-Washing – Igxathu emvakwe gxathu:
Thela amafutha ashukela njengamafutha omnqumo, amafutha kakhukhunathi noma i-bacon fat ibe yi-beaker.
Engeza umoya bese unikeza ingxube ye-emulsion emihle kakhulu.
Gcwalisa ingxube ye-liquid engxenyeni engilazi bese uyivumela ukuba uhlale ekamelweni lokushisa elingu-approx. 5 amaminithi ama-flavour ukufaka.
Emva kwalokho, faka ummbila efrijini ngobusuku bonke.
Ngosuku olulandelayo, amafutha ayeyoqina ngamandla emoyeni.
Sebenzisa ummese ukuze wenze umgodi ngamanoni aqhakazile futhi usebenzise umoya ohlanjululwe ngamafutha nge cheesecloth.
Ukucindezela okwesibili ngokusebenzisa isihlungi sekhofi ukususa noma yikuphi okushiywe kwama-fat particles.
Inhlanganisela enhle yezophuzo ezihlanjululwa ngamafutha yilezi:
rum kanye namafutha kakhukhunathi
i-vodka namafutha we-truffle
i-bourbon futhi iyancibilika amafutha e-bacon e-smokey
i-vodka / gin namafutha omnqumo
i-vodka / i-mezcal namafutha we-avocado
i-gin namafutha esesame
i-tequila ne-popcorn e-buttered
i-scotch ne-bhotela ensundu
ama-calvados namafutha e-foie gras ama-duck
UP200Ht for mixology
Amadivayisi we-Ultrasonic we-Mixology
I-Hielscher Ultrasonics inikeza amamodeli ahlukahlukene amadivaysi e-compact ultrasonic okusetshenziselwa ukusetshenziswa emishayweni nasezindaweni zokudlela. Idivayisi yethu ephethwe ngesandla I-UP200Ht (200W) ngokulawulwa kwedijithali nokubonisa okunezinhlamvu kuyi-ultrasonicator evelele kakhulu yababhanti nabaxube be-mixologists. I UP200Ht iyisisindo esincane, isisetshenziswa, esinikela ku-200W. Ngomkhiqizo wayo onokwethenjelwa nokuqhubekayo ophezulu, i UP200Ht unikeza amandla adingekayo ukwakha ama-emulsions amahle kanye ne-nanoemulsions, ukukhipha izingxenye ze-flavour nokunika imimoya. Umklamo wayo oyingqayizivele wenza UP200Ht i-eye-catcher kuyo yonke ibha futhi ihlaba umxhwele ababheki kanye nezivakashi zabo ngemiphumela ebonakalayo neyezikhukhumezayo.
Ukulungiselela i-Ultrasonic ye-Bitters
I-Ultrasonic Hydrodistillation yama-Essential Oil
I-Benton's Old Fashioned cishe isiphuzo esidume kakhulu kunawo wonke kufaka phakathi ama-bacon-fat enza i-bourbon njengesithako esiyinhloko. Ukubukeka kokuqala kwenziwa i-Benton's Old Fashioned eNew York, lapho idalwe khona ngu-2008 nguDon Lee kwenye yezingodo ezivelele kakhulu eManhattan – i-PDT (okushoyo “Sicela Ungasho”)
I-Bourbon ehlanjululwe ngamafutha ayi-2 oz
1/4 oz Grade B maple isiraphu
1 i-orange yesilinganiso se-Orange
Ama-ds angu-2, ama-Angostura
With izithako ezifanele esandleni, i-Benton's Old Fashioned isilungisiwe ngokushesha. Izithako zifakwa ku-beaker yokuxuba, zivuthwe, zihlanjululwe bese zithelelwa phezu kweqhwa elikhulu leqhwa ebhodini elincane. Gcoba nge-twist orange.
Amanye ama-cocktails adumile, afaka utshwala obuhlanjululwe ngamafutha njengento ebalulekile ebalulekile, isib. IsiKokisi uNegroni (usebenzisa i-coconut fat-washed pisco), i-Duck Hunt (ene-duck fat-washed washed), i-Iberico & I-Bourbon (ene-ingulube-fat yahlanza i-bourbon), uBuck & I-Butter (ene-bourbon ehlanza ibhotela), noma iPolynesian Pearl Diver (ne-scotch ehlanza ibhotela).